mardi, 05 décembre 2017 21:11
Tora-bato ao Brickaville: Nidoboka am-ponja i Roméo dit Dada
Nampidirina am-ponja vonjimaika ao Toamasina nanomboka io hariva io i Roméo dit Dada, iray amin'ireo voarohirohy ho atidoha mpitora-bato ireo fiara mandalo amin'ny lalam-pirenena faha-2 eto Brickaville.
Vokatr'io fanapahan-kevitry ny Fitsarana io dia misy andian'olona mikononkonona ny hanao barazy eto Brickaville dieny anio alina.
Amin'izy ireo, dia tsy mpanakarama mpitora-bato fiara i Roméo ary misy lehilahy antsoina hoe Dada miisa telo eto Brickaville koa maninona no tsy nosamborina avokoa, hoy izy ireo.
Olona miisa 11 no nosamborin'ny Zandary teto Brickaville noho io fitoraham-bato fiara mandalo amin'ny RN2 io. Nampidirin'ny Fitsarana am-ponja vonjimaika ny 6 tamin'ireo, navotsotra kosa ny 5.
mardi, 05 décembre 2017 21:00
Sambava: Tranona Mpitandro filaminana nitehirizana solika, may kila forehitra
Nipoaka androany tamin'ny 8ora maraina ny trano fivarotana iray tao Ambodisambalahy, Kaominina Anjagnoveratra ka tapaka mihitsy ny lalam-pirenena mampitohy an'i Sambava sy Vohémar noho io tranga mampalahelo niseho io.
Na niezaka aza ny Fokonolona dia tsy voatana ny afo noho fisian'ny solika ‘’essence’’ maro loatra tao an-trano.
mardi, 05 décembre 2017 14:58
Ambohimangakely: Nitokona ny mpiasan’ny Compagnie Malgache de Textile
Nanao fitokonana nitaky ny tombontsoany ireo mpiasa ao amin’ny CMT (Compagnie Malgache de Textile) Ambohimangakely, Antananarivo Avaradrano androany maraina.
Anisan’ny toherin’izy ireo ny famadihana ny zo andro fialantsasatra (congé) ho tsy andraisam-bola.
Tsy vao sambany no andrenesana fitarainan’ny mpiasa ao amin’ity orinasa afakaba CMT Ambohimangakely ity.
Vao maraina koa dia tonga teny an-toerana ny Zandary nanakana ny fidiran’ireto mpiasa nitokona ireto teo am-bavahadin’ny orinasa.
mardi, 05 décembre 2017 14:46
Cette journée est aussi dédiée à l'égalité des chances.
mardi, 05 décembre 2017 08:04
Asa tanana: Mpanamboatra Baffles
Andro vitsivitsy sisa dia ho avy ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona.
Amin’ny maha fety azy izay dia mifaly araka izany ny olona ary dia samy manao izay maha mety ny fiainany ny tsirairay.
Anisan’ny singa iray manamarika ny fety iray ny fandihizana indrindra ny fetin’ny faran’ny taona, koa dia ny fanamboarana ireny Baffles ireny indray no aseho eto.
Eny Ambalavao Isotry no ahitana ireto mpanamboatra Baffles ireto ary dia azo lazaina fa maro tokoa izy ireo. Araka ny filazan’ity tovolahy iray ity dia efa betsaka ny mpanao commande amin’izao fotoana izao ary dia manenjika eo amin’ny Baffles dimy hatramin’ny folo isa isan'andro izy ireo.
Ny vidiny moa dia arakaraky ny habean’ny haut Parleur izay mifandanja aminy.